Dom Perignon Vintage Rose 2004 ~ ICT.com.mm
Dom Perignon Vintage Rose 2004K598,000
HomeDom PerignonDom Perignon Vintage Rose 2004
Back to Dom Perignon
WineDom Pérignon Vintage Rosé Tasting Notes A very expressive nose of freshness, matureness and shows powerful pinot noir palate withaclear and vibrant finish of Chardonnay acidity. Food Pairing It shows... [Learn more]
Brand: Dom PerignonSKU: 174505N/ASee more: Accessories & Supplies, Beers, Wine & Spirits, Dom Perignon, Fine Wine Myanmar, New Arrivals, Products, ShopFilter by: Wine
WineDom Pérignon Vintage Rosé
A very expressive nose of freshness, matureness and shows powerful pinot noir palate withaclear and vibrant finish of Chardonnay acidity.
It shows consistent power to be pleased and makes it deal as an aperitif and perfect as the Champagne to enjoy with any meal. It beautifully goes well with sushi, fried food, salty or spicy dishes.
ပြင်သစ်နိုင်ငံထုတ် Dom Perignon Vintage Rose (2004) ဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်ကျော် ဝိုင်နဲ့ ရှန်ပိန်တွေကို ထုတ်လုပ်ရာ ပြင်သစ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း၊ Reims မြို့ Champagne ဒေသကနေ ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Champagne Blend ရောစပ်နည်းဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး အနီရောင်ဝိုင်စပျစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Pinot Noir စပျစ်နဲ့အတူ နက်မှောင်တဲ့အခွံနဲ့ Sparkling ဝိုင်စပျစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Pinot Meunier စပျစ်တို့ကို ရောစပ်ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အယ်လ်ကိုဟောပါဝင်မှု ၁၂.၅% ရှိတဲ့ Dry/2004 (Sparkling – Berries and Cream) ဖြစ်ပါတယ်။ Champagne Rosé သို့မဟုတ် Pink Champagne လို့ လူသိများတဲ့ ရှန်ပိန်ဖြစ်ပြီး အစာမစားခင် နှုတ်မြိန်ဆေး (Early Aperitif) အနေနဲ့ သောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။ မည်သည့်အစားအစာနဲ့မဆို လိုက်ဖက်တဲ့ရှန်ပိန်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် ဆူရှီ၊ အကြော်စာ အစားအစာများ၊ အငန်စာ၊ အစပ်ဟင်းပွဲတွေနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ ရှန်ပိန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Total price:K694,000 K677,200
This item: Dom Perignon Vintage Rose 2004 K598,000